QARIIRADA NORWEY: SHARAXAADDA, XAALADAHA SII KORDHAYA, BEERASHADA IYO DARYEELKA - BEERTA
Maple waa geed aad u caan ah. Waxaa laga heli karaa meel kasta: goobaha magaalooyinka iyo mareegaha, daaqadaha, cariishyada xagaaga. Waxay soo jiidataa dareenka sababtoo ah firfircoon qurux badan oo caleenta ah iyo taajkii, miraha aan caadi ahayn. Gaar ahaan quruxda dayrta, marka caleemaha ay ku rinji yihiin midabada dayrta dhalaalaya: huruud ah, oranji, iyo guduud. Mid ka mid ah noocyada xiisaha leh iyo kuwa caadiga ah waa khariidadda Norwey, xannaaneynta taas oo looga doodi doono qodobkan.
Ma taqaanaa? Qariirada Norwey waxaa sidoo kale loo yaqaan platanovidnym, platanolistnym, maxaa yeelay caleemaheeda waxay la mid tahay muuqaalka caleemaha diyaaradda.
Qariirada Norwey: sifooyinka nafleyda
Khariidada Norwey ama caadi ahaan - Waa geed qallafsan, oo ku baahsan Yurub iyo Aasiya, xayawaanka qallafsan iyo isku dhafan, keligood ama kooxo. Badanaa laga helay agagaarka ash, dhirta, bjørk, chestnut. Waxay magaceeda u heshay sababtoo ah caleemaha waxay tilmaameen dhinaca dambe.
Ma taqaanaa? Qariirada Norwey ee Laatiinka waxaa loo yaqaan 'Platanoides Acer'. Aser ee tarjumaadda micnaheedu waa mid adag, xoog leh.
Taajadka noocyada of maple waa mid qaro weyn, shiraac, shirokoraskidisty. Dhexdhexaadiyaha, waxay leedahay cabbir ah 15-20 m. Laamiyayaashu way xoog badan yihiin, ballaadhan yihiin, korna u koraan. Foosto cufan, awood leh. Qariirada Norwey way weyntahay - dhererkeedu wuxuu gaari karaa 30 mitir, celcelis ahaan, jir geed wuxuu gaaraa 12-28 m.
Jilifka dhirta yaryar waa midab-bunni, madow oo waqti leh oo daboolaya dildilaaca.
Caleemuhu waa sahlan, palmate, shan illaa todoba xabbadood oo qoyan. Waxay leeyihiin qiyaaso waaweyn - ilaa 18 cm oo dherer ah iyo ilaa 22 cm width. Qeybta sare ee saxanka caleen waa cagaaran cagaaran, qaybta hoose waa mid fudud. Xilliga dayrta, caleemaha waxay noqdaan jaalaha, oranji, dahab.
Bloom maple wuxuu dhacaa Abriil iyo badhka hore ee May ka hor ama ka dib marka xaashiyadu ay muuqdaan. Ubax waa huruud-cagaaran, ururiyey corymbose inflorescences ee 15-30 gogo '. Hayso dhadhan wacan. Qariirada Norwey waa warshad dioecious ah. Marka ubaxyada qaxwada, ubaxyada labka iyo dheddigba waxay u furan yihiin geedo kala duwan. Pollination waxaa ku dhaca caanaha. Midhaha ayaa ah laba-gacan. Qaabkeeduna wuxuu u oggol yahay, inta uu dabaylku socdo, in uu abuurka u fidiyo masaafo dheer oo ka fog geed. Fruiting wuxuu dhacaa bilaha Sibtembar - Oktoobar sannad walba laga bilaabo sannadka 17aad ee nolosha.
Nidaamka asaasiga ah ee khariidada Norwey waa mid aad u muuqda, oo ku soo galaya ciidda 20 cm. Badanaa waxa la arkaa in la gaaro dusha sare ee ciidda. Nolosha geedka waa 150 sano. Inkasta oo ay jirto macluumaad ku saabsan wakiilada 200-300-sano ee noocyada kala duwan.
Qariirada maple Norwey waxaa lagu faafiyaa by abuur, hababka xididada, grafting. Seeds waxay u baahan tahay ciriiri. In duurka, waxay bixisaa badan oo is-goosashada iyo koritaanka weyn oo ka soo dhoobo.
Marka da 'yar, khariidaddu si dhakhso ah ayey u koraan - iyada oo kororka sanadlaha ah ee 45-60 cm ee dhererka iyo 30-40 cm width. Ilaa da'da toddoba gaari 2 m iyo ka sare. Inta badan si firfircoon u koraayo 25-30 sano, ka dibna koritaanka koritaanka dhererka ayaa hoos u dhacaya, oo geedka wuxuu bilaabaa inuu koro ballaaran. Ka dib 50 sano, kororka ayaa hoos u dhacaya ama joojiya dhamaantiis.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro sifooyinka khariidada Norwey ee ah in ay tahay warshad qallalan, baraf u adkaysta oo awood u leh inay u adkeyso heerkulka qaboobaha illaa -40 digrii, dabaysha u adkaysta, si fudud u dulqaadanaysa kuleylka iyo abaarta, waxaa loo isticmaali karaa sidii xoolo-kobcaya, loomana baqayo in laga beerto magaalooyinka, xaaladaha hawada wasakhaysan.
Ma taqaanaa? Qodobka maple ee khariidada waa 150-200 kg halkii 1 ha. Laga soo bilaabo hal geed, shinni uruurin ilaa 10 kg.
Qariirada Norwey waxay leedahay qiyaastii 150 nooc, oo ay ku jiraan qaabab badan oo lagu qurxiyo, kuwaas oo ku kala duwan cabbirka, qaabka iyo midabka caleemaha, nooca taajka, heerka koritaanka. Beerta ugu caansan ee beerta dhulka ayaa ah qaababka noocaas ah "King Purple", qaabka Drummond, Schwedler, Global, Standard, gacmeed iyo kuwo kale.
Doorashada meel khariidad ah ee Norwey: shuruudaha loogu talagalay ciidda iyo iftiinka
Markaad dooranayso meel laga soo saaro Mapleka Norway, xidhiidhkiisa iftiinka waa in lagu xisaabtamaa, maaddaama ay tahay nal-u-baahan-yahay, dooro aagagga iftiinka leh. Inkasta oo uu geedku u dulqaadan karo oo laga beeri karo penumbra.
Waa muhiim! Looma baahna in dhirta loo yaqaan 'maple' ee xayawaanka degan. Hooska ayaa saameyn doona caleemaha sayniska - waxay noqon doonaan kuwo gaaban oo yar yar. Iyada oo ay da'daadu tahay, awood u leh inay hoos u dhigto geed gaabis ah.
Xayiraadda Qaabbilaadda xayawaanka iyo ciidda. Wuxuu jecel yahay carrada loamy ee bacrin ah. Waxay dareemaan fiicnaan qumman oo qummaatada ah. Ma kori doono salineeska, bacaadka ah, xiniinyaha, carrada cufan. Uma dulqaadan biyo taagan.
Habka loo beerto geedo maple dhalinyarada
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo sapling maple wuxuu noqon doonaa xilliga guga hore, marka aan ubbooyinku weli wiiqin. Sidoo kale, geedka waxaa lagu beeray karaa dayrta, ka dib markii caleen dayrta. Isku daridda ciidda loogu talagalay beerto waa in laga diyaariyaa isku dhafan. Waa in lagu bacrimiyo arimaha organic. Xannuunada culus, ciid ama qashin tuubo waa khasab. Waxaa fiican inaad iibsato seedling leh nidaam xidid xiran, oo leh buro waaweyn oo dhulka ah, taas oo aan la burburin markii beeray. Dhirta noocan oo kale ah ayaa si fiican u degi doona meel cusub waxayna si dhakhso ah u koraan.
Qoto dheer ee qoob ka beertu waa inay ahaataa ugu yaraan 50 cm. Shinniintu waxaa la dhigaa bartamaheeda, si tartiib ah u toosi xididdada oo ku saydhaa carrada. Kadibna khafiif ah.
Ka dib markii la beero, geedka waa in lagu daadiyaa si fara badan isla markaana sii wadi karaa nidaamkan si joogto ah laba bilood. Haddii aad qorsheyneyso inaad soo saarto koox khariidado ah, markaa waxaa lagula talinayaa in aad ka fogaato geedaha 2-4 mitir.
Daryeelka geedaha maple dhalinyarada
Wixii caleemo qoyan, beerashada iyo daryeelka ma u baahnayn aqoon, xirfad iyo dadaalo. Dhirta yaryar badanaa way badan yihiin. Ka dib da'da laba, khariidadaha waxay awoodi doonaan inay la tacaalaan abaaro muddo gaaban oo iyaga u gaar ah. Xilliga xagaaga, waraabinta waa in la sameeyaa toddobaadkii hal mar, xilliga qalalan waxay qaadan doontaa 1.5-2 baaldiyo per geedka. Xilliga dayrta-xilliga dayrta, waxaa la waraabiyaa hal mar bishii.
In kasta oo xaqiiqda ah in khariidaddu ay tahay mid aad u qabow udgoon, qaboobaha dhirta Norwey waxay u baahan doonaan hoyga xilliga jiilaalka. Iyada oo la kaashanayo dhirta caleemaha ama caleemaha qalalan daboolo qoorta xididka. Caleemaha aan lahayn wakhti ay ku daboolaan qoryo ka hor inta aan xilliga jiilaalka la qaboojin karin. Si kastaba ha ahaatee, tani maaha mid khatar u ah dhirta qulqulka - sababtoo ah heerka koritaanka degdegga ah, waxay awoodi doontaa inay koraan kuwa cusub, oo barafku ma saameyn doono muuqaalka geedka. Sannad kaste oo caabbinta dhaxan ee warshadda ayaa la xoojin doonaa.
Waa suurtogal in la soo celiyo maple ilaa 15 sano. Wuxuu si fudud u qaadaa habka tallaalka.
Daryeelka geedaha qunyar-socodka ah
Dhirta qaangaarka ah waxay u baahan tahay oo kaliya cirridka nadaafadda ee maple maple. Waxaa la soo saaray horraantii Maarso. Faallooyinka la qalajiyey, laamahii waxyeelloobay. Isla mar ahaantaana waa suurtogal in la soo saaro qashin qubka.
Maple ayaa si fiican uga jawaabaya timo - waxay si deg deg ah u bilaabataa laanta oo koraan. Waxa kale oo suurtagal ah in la soo saaro muraayad gacmeed oo ka soo baxaysa dhulka hoose ee wareega hoose ka dib waraabka iyo roobabka.
Cudurada iyo cayayaanka ee caleemaha maple
Under shuruudaha wanaagsan ee beerto iyo beerashada, oo maqan la'aanta qoyaan fadhiya, waxaa si dhif ah u saameeyeen geedaha maple iyo cayayaanka. Si kastaba ha ahaatee, wali way dhacdaa.
Khatarta ugu weyn ee geedku waa dhirbaaxo, taasoo muujisa dhibco yaryar oo yar yar oo jilicsan iyo caleemo. Haddii calaamadahan la helo, waa in isla markiiba la gooyaa laamaha jiran. Goobaha beeraha dalagyada iyo daboolida beerta beerta. Sidoo kale, qalabka beerta ee loo isticmaalay manjooyin ayaa ku xiran jeermis. Maple wuxuu ku dhacaa dhirta Taphrina acerina, taasoo keenta dhibco madow oo caleemo ah.
Xayawaanka maple ayaa ka xanaajin kara maple cad. Salaaxu waxay ku quudisaa caleemaha geedka. Si loola dagaalamo, waxaa lagama maarmaan ah in la burburiyo laanta la saameeyey. Dhaawac xoog leh ayaa la isku dayay in lagu buufiyo ammophos.
Si looga fogaado weerarka khariidada qamriga, ka hor intaadan la maareyn, maple waa in lagu buufiyaa xal 3% nitrafene. Sidoo kale, waxqabadyada waxyeellada leh ee khariidadu waxay qaban karaan weevil caleen. In weerarada, daaweynta leh chlorophos loo isticmaalo.
Isticmaalka Maple Norway ee Naqshadeynta Cilmi-baarista
Tan iyo markii khariidadda Norway ay tahay mid lagu qurxiyo xilliga daaqsinka, waxay si fiican u dulqaadaneysaa xaaladaha magaalooyinka iyo qaabaynta timo taajka ah, waxaa loo isticmaalaa qaabeynta muuqaalka ee qaabab ballaadhan oo kala duwan. Tani waa mid ka mid ah nuucyada caadiga ah ee loo isticmaalo dhismaha beerta dhulka - marwalba waxay ku yaalaan jardiinooyinka magaalooyinka, xarriiqyada, mulkiyada, waddooyinka, wadooyinka. Waxaa lagu beeray maaddo iyo geedo kooxeed. Waxay u muuqataa mid aad u fiican oo ku saabsan asalka jilicsan. Khariidadaha waxaa laga sameeyaa dijitaal, oo loo isticmaalo sariirta alpine, dhagaxyada. Ku koraan garbo, xoqan qaabka bonsai.
Isticmaal khariidada Norwey ee daawada dadweynaha
Daawooyinka dadwaynaha ee lagu saleeyay khariidadda Norwey, waxay leeyihiin guryaha soo socda:
Jilibku waxa loo adeegsadaa sidii loo yaqaan 'astronomic' for the disorders of nidaamka dheefshiidka iyo xoojinta timaha timaha. Maraqyada iyo infusions caleemaha waxay yareyn karaan kulaylka waxayna xoojinayaan habka difaaca jirka. Marka ARVVI isticmaasho lacagtii miraha maple. Sidoo kale, laba-caws ayaa loo isticmaalaa dhagxaan kellida. Ubax ayaa kuu oggolaanaya inaad la qabsato dhibaatooyinka habka dheef-shiidka. Casiir khudaarta Norwey waa antiseptic dabiiciga ah. Waxaa lagu daaweeyaa boogaha, boogaha, bararka maqaarka. Isku dhajinta caanaha, waxay awoodaa in ay qufacdo. Waxay cabbaan si ay u xoojiyaan ciidamada difaaca jirka, si ay u haraadiyaan haraadka. Malabka maple sidoo kale waa wakiil immunomodulatory wanaagsan. Waxaa lagula talinayaa dhiig-yaraanta iyo atherosclerosis, si loo kordhiyo nuujinta isla markaana caadiyan waxqabadka nidaamka neerfaha.
Geedka qulqulka waxaa loo isticmaalaa dendrotherapy. Waxaa la rumeysan yahay in ay awood u leedahay in ay soo qaadato tamar wanaagsan, waxay ka caawisaa sidii ay ula qabsan lahayd niyad-jab, niyad xumo iyo daal.
Waa muhiim! Dhamaan lacagaha loo diyaariyay ee ku saleysan khariidadda Norwey, waa in loo isticmaalo keliya sida daaweynta dheeraadka ah iyo ka dib markaad la tashato takhtar.
Maple waa warshad badan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa dhirta ornamental, waxaa lagu beeray goobo ballaaran iyo makhaayadaha xagaaga yar yar. Waxaa lagu qiimeeyaa size weyn, taaj qurux leh cufan, caleemo la gooyay, ubaxyo udgoon iyo miraha aan caadi ahayn. Qoryihiisa ayaa loo ogol yahay inuu sameeyo alaabta, qalabka muusikada iyo farshaxanka. Bees waxay u jeceshahay urka quruxda badan iyo goosashada ariga iftiin macaan, sidaas awgeed alwaax waa qiimo u leh shinni. Leaves, jilif, miro iyo casiir ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cuduro kala duwan.